आलिया भट्ट: विहेको कुरा गर्दा वुवा महेश भट्टले बाथरुममा थुनिदिने ध’म्की दिनुहुन्छ – Ramailo Sandesh
आलिया भट्ट: विहेको कुरा गर्दा वुवा महेश भट्टले बाथरुममा थुनिदिने ध’म्की दिनुहुन्छ
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपूरको विवाहको चर्चा पछिल्लो समय धेरै हुने गरेको छ । उनीहरुले कहिले विवाह गर्दैछन् भनेर धेरै चासो पनि लिने गरेका छन् ।
तर, एक अन्तरवार्तामा आलियाले आफ्ना पिता महेश भट्ट अहिले नै उनको विवाह गर्ने मनस्थितीमा नभएको बताएकी छन् । उनले पिताले आफूलाई छिट्टै टाढा बनाउन नचाहेको पनि बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, “मेरो बुवालाई मेरो धेरै नै चिन्ता छ । उहाँको चाहाना त मेरो विवाह नै नहोस् भन्ने हो ।” उनले आफ्ना पिताले विवाहको कुरा गर्दा आफूलाई बाथरुममा बन्द गर्ने ध’म्की दिने गरेको पनि सुनाइन् । उनले भनिन्, “विवाहको कुरा गर्दा बुवाले मलाई बाथरुममा थुनिदिने ध’म्की दिनुहुन्छ । तर आफ्नो नजरबाट गराउन नचाहाने बताउँनुहुन्छ ।”पिताले छोरी टाढा हुने डरले विवाह गर्न नदिएको आलियाले अगाडि खुलाइन्।
के तपाईं ग्रीन टि पिउनुहुन्छ? मिलाएर पिउन नजाने गर्छ असर जान्नुहोस सहि उपाय र ५ असरहरु ।
ग्रीन टि तौल घटाउन प्रतिरक्षा बूस्टरको रूपमा चिनिन्छ। ग्रीन टि पिउने धेरै फाइदाहरू छन्, तर ग्रीन टि केही स्वास्थ्य सल्लाहहरूको ख्याल गरे पछि मात्र सेवन गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि, बिहान खाली पेटमा ग्रीन टि पिउनु हुँदैन र जसको पाचन प्रणाली कमजोर छ, तिनीहरूले हरियो चिया पिउनु हुँदैन। आउनुहोस्, किन बिहान खाली पेटमा ग्रीन टि सेवन गर्न हुदैन? जान्नुहोस्।
व्यक्ति जो अधिक ग्रीन टि खान्छन्, उनीहरूलाई माइग्रेन र टाउको दुखाइ जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। धेरै जडिबुटी ग्रीन टि मा पाइन्छन्। यस्तो अवस्थामा, जब तपाईं खाली पेट चिया पिउनुहुन्छ, यसको तापले तपाईंको दिमागलाई असर गर्दछ।
ग्रीन चिया खाए पछि अनुहारमा एक्ने समस्या पनि छ। यी सबै घाटाहरू खाली पेटमा ग्रीन चिया खाएकोले हुन्। यदि तपाईं खाली पेटमा ग्रीन चिया लगातार सेवन गर्न थाल्नुभयो भने, यसले धेरै छाला सम्बन्धि स,मस्याहरू हुन थाल्छ।
खाली पेट ग्रीन चिया सेवन गर्नुले मेटाबोलिज्ममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यो गरेर तपाईले पेट जलन, भोक र एसिडको समस्या जस्ता स,मस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
तपाईलाई ग्याँस र एसिडिटीको समस्या पनि हुनसक्छ खाली पेटमा लिएर। साथै, यसको सेवनले पित्तको रसको गठन र कामको प्रक्रियालाई असर गर्छ।
र,क्त चाप बढ्नु
खाली पेट ग्रीन चिया पिउँदा बान्ता हुन सक्छ। साथै, यसको उच्च मात्राको सेवनले घबराहट, तातो र रक्तचाप बढाउन सक्छ, त्यसैले खाली पेटमा हरियो चिया पिउनु हुँदैन।
बिहान ग्रीन चिया खानु उत्तम हुन्छ, तर यससँग केही खाँदा मात्र। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, बिस्कुट वा कुनै पनि फल सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले पिउँदा, तपाईबाट यसले धेरै लाभहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र सँधै स्वस्थ हुनुहुनेछ।